प्रदेशका इन्चार्जहरुले प्रचण्डलार्इ सोधे– नयाँ शक्तिमा जानबाट कसरी रोक्ने ? - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
प्रदेशका इन्चार्जहरुले प्रचण्डलार्इ सोधे– नयाँ शक्तिमा जानबाट कसरी रोक्ने ?
फागुन ९ गते, २०७२ - १४:४७
काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीको स्थायी समिति बैठकमा प्रदेशका पार्टी इन्चार्जहरुले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई नयाँ शक्तिमा जानबाट रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पार्टीका स्थायी समिति बैठकमा धारणा राख्ने प्रदेशका इन्चार्जहरुले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु धमाधम नयाँ शक्तिमा गएको भन्दै यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बताए । आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज तथा सचिवहरुले धारणा राखेका थिए ।
उनीहरुको रिपोर्टिङका क्रममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोधेका थिए– नयाँ शक्तिमा जानबाट कसरी रोक्ने ? भनी सोधेको वैठकमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।
बैठकमा सरकारका कामकारवाहीबारे उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले धारणा राखेका थिए । सांगठनिक अवस्थाबारे सात प्रदेशका इन्चार्जले जानकारी गराएका थिए । आइतबार बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रदेशका इन्चार्ज तथा सचिव र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले रिपोर्टिङ गरेको महासचिव कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।
आइतबार मात्रै एकीकृत माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्यसहित चार जना नयाँ शक्तिमा गएका छन् । सबै माओवादीहरु एक हुने र एक वर्षभित्रै एकीकृत माओवादीलाई ठूलो पार्टी बनाउने अध्यक्ष प्रचण्डले अभिब्यक्ति दिँदै आए पनि पार्टी झनै कमजोर बन्दै गएको नेता कार्यकर्ताको गुनासो छ । स्थायी समितिको बैठक सोमवार बिहान ८ बजे पुनः बस्नेछ ।
फागुन ९ गते, २०७२ - १४:४७ मा प्रकाशित